ဘုန်းကျော်: Jan 3, 2012
အခုမလွှတ်ပေမဲ့ နောင်ကြရင် လွှတ်မှာပါ စိတ်ရှည်ရှည်ထားကြလေဗျာ....ရွေ့ နေတယ်လေ...။ အရွေ့ ...ဆိုတာ...အရွေ့ ပဲဆိုတော့ ရွေ့ နေတာပေါ့နော်...။
(၁) ကျောင်းသားတပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း)ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခွပ်ဒေါင်းအလံကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးလွှင့်ထူခဲ့တဲ့ ရဲဘော်တွေအားလုံးကို မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ လို့ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ နှစ်သစ်မှာ အနာဂတ်အတွက် တက်ကြွလန်းဆန်းတဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ရှေ့ခရီးဆက်ကြမယ်။ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ ပူးကပ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ကို ရှင်းထုတ်ကြမယ်။ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် ( အထက်ဗမာပြည်) ရဲဘော်တယောက်အနေနဲ့၊ ၁၉၉၀ မန္တလေးညီလာခံကို လာရောက်တက်ခဲ့ကြတဲ့ မိုးညှင်းဒေသ က ကျောင်းသားတပ်မတော် ရဲဘော်တွေကို အထူးတလည် နှုတ်ခွန်းဆက်သ ချင်သလို၊ ကျောင်းသား တပ်မတော် ( မြောက်ပိုင်း) ရဲ့ တော်လှန်ရေးသမိုင်းဂုဏ်သိက္ခာကို သွေးစီးချောင်းတွေပေါ်မှာ မျှောချ၊ အဖွဲ့ဖျက်ပစ်သည်အထိ သေးသိမ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့၊ သူ့လူကိုယ့်ဘက်သား လူသတ်သမားများကိုတော့ သမိုင်းစာရင်းရှင်းတမ်းအဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားကြပါမယ်။
ကျောင်းသားတပ်မတော် နဲ့ တော်လှန်ရေးကို အသက်စွန့်ပြီး ချစ်ခဲ့ကြပေမဲ့၊ ကျဆုံးစာရင်းမှာ အသိအမှတ်ပြု မခံရတဲ့ ရဲဘော်တွေအတွက် ဆက်လက်မေးခွန်းထုတ် ကြရပါလိမ့်မယ်။ စိန်ခေါ်တောင်းဆိုကြရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပါ။ သူတပါးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ကံတွေကို ကျနော်တို့ ဆီ လောင်မြိုက်ကူးစက်မှုတွေ မရှိစေချင်ပါဘူး။ ပြဿနာတွေကို စိတ်အေးအေးထားပြီး ဖြေရှင်းကြရပါ လိမ့်မယ်။
လူပုဂ္ဂိုလ်တစုံတယောက်အပေါ်မှာ မုန်းတီးခြင်းမျိုး၊ တဖွဲ့နဲ့တဖွဲအုပ်စုဖွဲ့ သိက္ခာချတိုက်ခြင်းမျိုး ကို ရှောင်ရှားပြီး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံရုန်းကန်မှုရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို သင်ခန်းစာယူကြသင့်ပါတယ်။ မှတ်တမ်းအဖြစ်လောက်သာ ထားရှိခြင်းမပြုလုပ်ပဲ၊ ဆက်လက် အရေးယူဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ တကယ်တော့ ဒီအကြောင်းအရာတွေကို ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအောင်မြင်ဆုံးခန်း တိုင်တဲ့အချိန်ကျမှ ဖွင့်ပြောဖို့ မြိုသိပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကို လေးမြတ်စွာလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော်တွေ နဲ့ လှုပ်ရှားမှု သမိုင်းကို မထိခိုက်စေချင်တာတကြောင်း၊ ကျန်တဲ့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ ဟာ ဒီအကြောင်း အရာတွေကို ဖတ်ပြီး နိုင်ငံရေးအပေါ် စိတ်ပျက်သွားမှာ တကြောင်းကြောင့် ဖွင့်မပြောချင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက်၊ လူသတ်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေခဲ့တဲ့သူတွေ ဟာ၊ ကျောင်းသား တပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) ကို စံနစ်တကျဖျက်ဆီးသွားပြီး နောက်၊ ထိုင်းနယ်စပ်မှာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေကို အုပ်စုလိုက်ကျူးလွန်ပြီး၊ နိုင်ငံတကာက ထောက်ပံ့တဲ့ငွေတွေကို အောင်သေအောင်စား စည်းဇိမ် ခံ ပျော်မြူးခဲ့ကြတယ်။
ပြည်ပ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံလှုပ်ရှားမှုကို နာမည်ပျက်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ နိုင်ငံတကာက ယုံကြည်မှုမဲ့လာပြီး NGOs တွေနဲ့ ငွေထောက်ပံ့သူတွေက ပြည်တွင်းကိုအာရုံရွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးကို ဝင်ရောက်ရှုပ်ကြဖို့ ခြေလှမ်းပြင်နေကြတယ်။ ဒီတခါတော့ မရတော့ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ KIA နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောစရာတခုရှိပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေ အယောက်(၉၀) ကျော် ဖမ်းထားတာကို ကြားတော့ KIA ဗိုလ်မှူးတွေက လာရောက်မေးပါတယ်။ ( ထုံးစံအားဖြင့်တော့ KIA က ကျောင်းသားတပ်မတော်အပေါ်မှာ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်လေ့မရှိပါဘူး)၊
“ ငါတို့မှာ ဘရန်ဆိုင်းလက်ထက်ကတည်းက ရန်သူ့ထောက်လှမ်းရေးဆိုလို့ (၅) ယောက်လောက်သာ မိဘူးပါတယ်။ မင်းတို့ဟာက များလှချည်းလား။ ဟုတ်လို့လား” ဆိုတော့ “ ရော်နယ်အောင်နိုင် က အော် - ဗိုလ်မှူးတို့ကလည်း ကျားကိုက်ပါတယ် ဆိုမှ အပေါက်နဲ့လား လို့ မေးနေရသေးတယ်။
ဗိုလ်မှူးတို့က ငါးယောက်ပဲ မိတယ်ဆိုတော့ ညံ့တာပေါ့” လို့ ရယ်မောပြီးဖြေတယ်လို့သိရ ပါတယ်။ ရော်နယ်အောင်နိုင် ရဲ့ “ All the Wars are Dirty” အင်တာဗျူးမှာ ကေအိုင်အေ အပေါ်အပြစ်တွန်းချ ထားတဲ့ စကားတွေကို ပြုံးမိပါတယ်။ လူသတ်တာတွေကြားတော့ ဖုံးမရဖိမရ အနံ့တွေထွက်လာတဲ့အခါ ကျတော့ ကေအိုင်အေ က စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဇွတ်အတင်းဝင်ရောက်လာပြီး ရပ်ခိုင်းတော့တယ်။ နန်းအောင်ထွေးကြည် ကို ခေါ်ထုတ်သွားတယ်။
တကယ်တော့ လူသတ်မှုအပြင် နောက်ထပ်မေးရမဲ့ မေးခွန်းတခုကတော့ အေဘီ ( မြောက်ပိုင်း) ဟာ ဗဟိုလို မဟုတ်ပါဘူး။ ဗဟိုကော်မတီတွေက ချမ်းသာကြပါတယ်။ ကေအိုင်အေ ဆီက ကျောက်စိမ်းတွင်းတွေ အပါအဝင် အထောက်အပံ့တွေရထားကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ ရံပုံတွေတွေ ဘယ်ရောက်သွားသလဲ ဆိုတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ကာယကံရှင်တွေဖြေဆိုနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။
ပထမပိုင်းအနေနဲ့ မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားရဲဘော်တွေရဲ့ စာရင်း ကို ပေးပို့ လိုက်ပါတယ်။ လူနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုတော့ အထူးပြောချင်ပါတယ်။
တဦးက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင် ရဲမေ မခင်ချိုဦး အကြောင်းပါ။ သူမ နဲ့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ ပြည်စိုးနိုင် (ရန်ကုန်) ကို လိုင်စင်လို အေးခဲတဲ့ရာသီအောက်မှာ မြေမြှုပ်ပြီး၊ ခေါင်းကိုသာမြေပေါ်ဖေါ် ထားခဲ့တယ်။
နှိပ်စက်မှုဒဏ်ကြောင့် သေဆုံးသွားတဲ့အခါ၊ မခင်ချိုဦး ကို အေးခဲနေတဲ့ ရုပ်အလောင်းအား Oral Sex လုပ်ခိုင်းတယ်။ မျိုးဝင်းတို့ အုပ်စုတစုလုံးက မုဒိမ်းကျင့်ပြီး ခေါင်းဖြတ်သတ်ဖို့ လုပ်တဲ့အခါ၊ “ နောင်ဘဝမှာ ခုလို ခေါင်းပြတ်ကြီးနဲ့ မသေပါရစေနဲ့၊ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ပေးပါ” လို့ တောင်းဆိုတဲ့အတွက် သံချောင်းက သေနတ်နဲ့ဝင်ပစ်ပေးခဲ့တယ်။
ဒုတိယတဦးကတော့ ကိုကျော်ဝေ ပါ။ သူ့ကို ပျော့မိုင်းနဲ့ချည်ပြီး ဘောလုံးကွင်းထဲပတ်ပြေးခိုင်းတယ်။ ပျော့မိုင်းကွဲသွားခဲ့တဲ့အတွက် လက် ပြတ်သွားတယ်။ အဲ့ဒီ လက်ပြတ်ကြီးနဲ့ပဲ အချုပ်ထဲမှာ ဆက်လက်ချုပ်နှောင်ထားခဲ့တယ်။ သူ့လိုပဲ စစ်ကြေရေးကာလမှာ မိုင်းခွဲခံရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။
သံပြားအားမီးဖုတ်ပြီး ပေါင်ခြေသလုံးထံ ကပ်ထားခြင်း၊ ဗိုက်ပေါ်သို့ ကတ္တရာစီးပြားများကို မီးရှို့၊ အစက်ချ မီးမွှေးခြင်း၊ သံချောင်းများကို မီးဖုတ်ခါ၊ ပေါင်အတွင်းသို့ ထိုးသွင်းခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားခြောက်ခြားစေရန်၊ ကိုကျော်ဝေကို ထင်းတုံးပေါ်တင်ပြီး ခေါင်းဖြတ်သတ်ထားခါ၊ ထိုခေါင်းပြတ်မှ၊ ပန်းထွက်နေသော သွေးများ ကို၊ သောက်ခိုင်းခြင်း၊ ကိုချိုကြီး၏ လက် ကို လက်ကောက်ဝတ်မှ ခုတ်ပြတ်သော်လည်း၊ ခုတ်ချက်မမှန်ကာ၊ လက်ဝါးအရင်းပိုင်းမှ ပြတ်ထွက်ခါ၊ ( လက်မ တချောင်းထဲပင် ကျန်ထားပါသည်)၊ ထိုလက်ပြတ်အား ကိုက်ထားခိုင်းခြင်း၊ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရချိန်ထိ၊ ဒုတ်ကောက်ဖြင့်သာလမ်းလျှောက်နိုင်ပြီး၊ အသတ်ခံ လိုက်ရချိန်တွင်၊ ခေါင်းမပြတ်သဖြင့်၊ ပြန်ထလာသည်ကို၊ ပေါက်ပြားနောက်ဖင်ဖြင့်၊ ရိုက်ချ သတ်ခံရပါသည်။
ဦးခေါင်းအား ထင်းတုံးပေါ်တင်ပြီး၊ ကိုမျိုးဝင်းမှ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့ပါသည်။ အသတ်မခံရသေးချိန် တွင်၊ တောင်းပန်သေးသော်လည်း အသတ်ခံရမည်ကို သိသောအခါ၊ ဓမ္မစစ် ကျောင်းသားကွ၊ မင်းတို့ သတ်လို့ ငါသေပေမဲ့၊ ငါ့ဝိညာဉ်မသေဘူးကွ၊ ကျော်ဝေ- ဓမ္မစစ် ကျောင်းသားကွ၊ သတ်လိုက် ရတယ် လို့ အော်ဟစ်သွားခဲ့ပါသည်။ စစ်ကြောရေးကာလတွင်လည်း မိုင်းခွဲပွဲတွင် လက်ကို မိုင်းခွဲခံရခါ လက်ဖြတ်ပစ်ရသူဖြစ်ပါသည်။
ကိုသံချောင်း၊ ကိုမျိုးဝင်း၊ ကိုအောင်နိုင်တုိ့မှ ကော်မတီဝင်များနေထိုင်ရာ တည်းစခန်းရှေ့သို့ခေါ် ယူပြီး ခြေထောက်တွင် မိုင်းအပျော့စားကပ်ပြီး၊ မိုင်းခွဲခါ ခြေဖြတ်ခံရ၊ ( ထိုမိုင်းခွဲပွဲတွင်) မငယ် ( နန်းအောင်ထွေးကြည်) အပါအဝင် နှိပ်စက်ခံခဲ့ရသော်လည်း၊ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ လက်မိုင်းခွဲမခံခဲ့ရ၊ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုခြေပြတ်ဘဝနှင့်ပင်၊ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရပါသည်။
ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်း၏ မွေးစားသားဟုဆိုသည်။ အပတ်စဉ် (၅) ကာလတွင်၊ ကိုမျိုးဝင်းအား အများဆုံးဝေဖန်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ မိမိ၏ပါးစပ်အား တိတ်ဖြင့်ကပ်ခါ၊ ကိုမျိုးဝင်း ကို အသံတိတ် ဆန္ဒပြခဲ့သည်။ ကျောင်းသားတပ်ထောက်လှမ်းရေးများ၏ ( အထူးသဖြင့် ကိုမျိုးဝင်းမှ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခဲ့) ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံခဲ့ရပါသည်။
အပတ်စဉ် (၅) သင်တန်းကာလ၊ တပ်တွင်းဆွေးနွေးပွဲတွင်၊ ကိုမျိုးဝင်းအား ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ခဲ့ သဖြင့်၊ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခါနီးတွင်၊ ကိုမျိုးဝင်းမှ၊ “ ဟေ့ကောင် မင်း ငါ့ကို အပတ်စဉ် (၅) တုံးက ပြော သလို ပြောနိုင်သေးလားဟု အငြိုးကြီးစွာ မေးခဲ့သည်ကို ကျနော်ကိုယ်တိုင်နားဖြင့်ကြား ရပြီး၊ ဋ္ဌေးမြင့်ဝင်းမှ သေနတ်နှင့် ပစ်သတ်ပေးရန်တောင်းဆိုသဖြင့်၊ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခံရပါသည်။
အသတ်ခံရခါနီးတွင်၊ ငိုယိုရှစ်ခိုးတောင်းပန်သော်လည်း၊ ရဲဘော်များအားလုံးရှေ့တွင် ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ပြီး၊ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခံရပါသည်။
အထက်ပါစာရင်းထဲမှာ ကိုကျော်ဝေ ( မန္တလေး) နဲ့ ပြည်စိုးနိုင် တို့က ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၅) ရက်သတ်ဖြတ်ခံရမှု ထဲမှာ စာရင်းမကြေငြာခဲ့ပါဘူး။
(၂) ကိုစိုးဝင်းသန်း ( မန္တလေး)-
KIA ဆေးရုံမှာတက်နေစဉ်၊ သန်းဇော် နှင့် လူတစုမှလာရောက်ခေါ်ဆောင် သွားခါ အာသံကုန်းတွင် သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။
(၃) ကိုဝင်းနောင် (ရန်ကုန်)
ဧပြီလဆန်းပိုင်းအတွင်း ဗန်းမော်ခရိုင်မှာ အသတ်ခံရ၊
ရက်စက်စွာနှိပ်စက်ခံခဲ့ရပြီး ခုတ်ထစ် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်
(၅) ဦးကျော်ကျော်ဘုန်း ( ခရိုင်မှူး) -
ရှေ့တန်းမှာ လူမဆန်စွာ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်
သူ့ မျက်နှာသွင်ပြင်က ရိုးသားတဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။
၀တ်စားဆင်ယင်ထားတာတော့ ဆရာ ၀န်တယောက်လိုပါပဲ။
အပြာရောင်ရှပ်အင်္ကျီကိုအညိုရောင်ဘောင်းဘီနဲ့ သပ်သပ်ယပ်ယပ်ဝတ်ဆင်လို့ ။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောကတော့ သိပ်ကောင်းပါတယ်။
သူ့ ဘ၀ရဲ့ကြေကွဲစရာဇတ်လမ်းတွေ ကို အေးအေးဆေး ဆေးပြက်လုံးထုတ်ရယ်မောသူပါ။
တချိန်က သူဟာ ကျောင်းသားတပ် မတော်မြောက် ပိုင်းရဲ့ဥက္ကဌတဦး ဖြစ်ခဲ့သလို ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ်ကို ထိမှန်ခဲ့တဲ့ အကြီးမားဆုံး နာမည်ပျက်မှုမှာ အဓိက နေရာကပါဝင်ခဲ့သူတဦးပါ။
၁၉၉၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်မှာ ကျောင်းသားစစ်သားတွေဟာ သူတို့ ရဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက် ၁၅ ယောက်ကို အစိုး ရရဲ့ သူလျှိုလို့ စွပ်စွဲပြီး သုတ်သင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်က ဒီကိစ္စအောင်နိုင် ကို အင်တာဗျူးလုပ်ချင်နေပါတယ်။
ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ သူက ဒီသုတ်သင်မှုကို အမိန့် ပေးခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေထဲက တယောက်ဖြစ်နေ လို့ ပါ။
ဒီအင်တာဗျူးက သူ့ ကိုအကျပ်အတည်းထဲပို့ သလိုပါပဲ။
ဒီကိစ္စကိုအရင်ကတယောက်မှ အင်တာဗျူး သူမရှိခဲ့လို့ သူအံ့သြသွားပုံပါ။
အင်တာဗျူးဖို့ သူသဘောတူပါတယ်။ ကျနော်တို့ မဲဟောင်ဆောင်မှာ တွေ့ကြတယ်။
သူ့ အတန်းကအဖွဲ့ တွေအဲဒီမှာရှိကြတယ်။ မြန်မာဒေါက်တာတွေနေတဲ့ အိမ်ပေါ့။
အဲဒီမှာ ကျ နော်လည်းနေတယ်။ ကျနော့် မှတ်စုစာအုပ်နဲ့တိပ်ရီကော်ဒါကို စားပွဲပေါ်ပြင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အောင်နိုင်က ဒီညတော့ ညတာရှည်ဦး တော့မှာပဲလို့ ဆိုတယ်။
၀ီစကီနဲ့ ရေခဲနဲ့။၀ီစကီသောက်ရင်း ကျနော့် မေးခွန်းတွေကိုသူဖြေပါတယ်။
သူ့ ထွက်ဆိုချက်တွေ အတွက် တိပ်ရီကော်ဒါကို ကျနော် စဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
၁၉၈၈ မှာကျနော်က မန္တလေးဆေးကျောင်းမှာ တက်နေပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်တော့ ကျနော် က ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ပါ။
အစိုးရက နိုင်ငံေ၇းလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် စွပ်စွဲဖမ်းဆီးမှုတွေ လုပ်တဲ့အခါ ၁၉၈၉ မှာ မန္တလေးကနေ မြောက်ပိုင်းကို ကျောင်းသား တပ်မတော် ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။
တော်တော်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ က မြို့ ကျောင်းသားတွေပါ။
အများစုက တောထဲမှာနေဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံ မရှိကြပါဘူး။
ကျနော် တို့ နေဖို့ ဝါးတဲတွေဆောက်ကြတယ်။ ကေအိုင်အိုက ရိက္ခာ ထောက်ပါတယ်။
ရပ်တည်ဖို့ ခက်ပါ တယ်။ ကျနော်တို့ ကဗမာတွေဆိုတော့ ကချင်တွေ အပြည့်အ၀မယုံပါဘူး။
ငွေရဖို့ အတွက် ကျောက်စိမ်းရှာ ဖို့ မိုင်း ကွင်းတခုပေးပါတယ်။ ပေ၈၀၀၀ ထောင်လောက်မြင့်ပါတယ်။
ကျောက်တောင်တွေဖြစ်လို့ ပါးကောက်ပဲသီးနှံ စိုက်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ ထောက်ပံ့တာနဲ့ မှီခိုရပါတယ်။
မိုးရောက်တော့ ဗမာစစ်တပ်က လာတိုက်ပြီး ကျနော်တို့ စတိုကို ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။
ဆားမရှိစားစရာမရှိဆယ်ရက်လောက်ဖြစ်သွား တယ်။ အားပြတ်ပြီး ငှက်ဖျားတွေလည်းဖြစ်လို့ တချို့ လည်းသေကုန်ကြတယ်။
သူငယ်ချင်းတော်တော်များများ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ တချို့ ဆယ့်ရှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။
တယောက်ကိုတလမှ ၅၀ကျပ်သုံး ဖို့ ရ တယ်။ကျနော်တို့ မျောက်တွေထောင်တယ်။
လူတွေသေကြတာကြည့်ပြီးရှော့ ရတယ်။ ကျနော့်မှာစစ်ပွဲအတွေ့ အကြုံမရှိဘူး။
ဒါပေမယ့် ကျနော်တိုက် တယ်။
၁၉၉၀ မှာ ရက်လေးဆယ်လောက် စစ်တိုက်ရတယ်။ အဲဒီတိုက်ပွဲမှာ ခေါင်းဆောင် ဒဏ်ရာရ တော့ကျနော်ကအမိန့် ပေးရတယ်။
ကေအိုင်အိုဆီကလက်နက်တချို့ ရတယ်။ သေသွားတဲ့ ရန်သူစစ်သား ဆီကလည်းလက်နက်ရတယ်။
အဲဒီအချိန်က ကျနော်ကရွေးကောက်ခံရတဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးပါ။
တခုသတိပြုလာမိတာက ရန်သူ့ လိုင်းတွေ ကြားထဲမှာ ပြဿနာတစုံတရာမရှိပဲသွားလို့ ပြန်လို့ ရနေတာပါ။
စစ်ထောက်လှမ်းရေးမိသားစုနဲ့ ဆက်နွယ် နေတဲ့ ကျောင်းသားတချို့ တပ်သားသစ်စုဆောင်းရေးထဲမှာပါလာတာပါ။
အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ တပ်သားအရေအတွက် ၈၀၀ ကျော်အထိတိုးလာပါတယ်။
စစ်ထောက်လှမ်းရေး နဲ့ ချိတ်ဆက်နေသလားသံသယဖြစ်လာပါတယ်။
ရှေ့ တန်းကရတဲ့သတင်းတွေအရလည်းကျနော်တို့ ဘက်က ကျဆုံးနေပါတယ်။ အခြေအနေက သံသယဖြစ်စရာ အခြေအနေပါ။
နအဖစစ်သားတွေကို ကျနော်တို့ တည်နေရာကိုလမ်းညွှန်ပေးနေတဲ့ အမှတ်အသားတွေကို သစ်ပင်တွေမှာ ရဲဘော်တွေက သတိပြုမိပါတယ်။
ဒါနဲ့ တချို့ ကိုစောင့်ကြည့်ပါတယ်။ လေးငါးယောက်လောက်ကိုဖမ်းပြီး စစ် ကြောရေးလုပ်တော့ ထောက်လှမ်းရေး စာရင်းတချို့ ရပါတယ်။
အဲဒီစာရင်းထဲမှာဗဟိုကော်မတီ အဖွဲ့ ဝင် တွေပါပါနေတယ်ဗျ။
တချို့ ကထောက်လှမ်းရေး လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ စပိုင်တွေဖြစ်ပြီး တချို့ က အင်ဖော်မာသတင်းပေးတွေပါ။တချို့ ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒအမြင်နဲ့ လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
I panicked.လူ့ အခွင့် အရေးတို့ ဘာ တို့ ဆိုတာလည်းကျနော်တို့အဲဒီအချိန်ကနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။
စပိုင်စာရင်းက အယောက်ရှစ် ဆယ်ကျော် ဖြစ်နေတယ်။
ကျနော်တို့ ကို မယုံမှာစိုး လို့ ရိုက်ထား တဲ့ဗွီဒီယိုခွေပါရှိပါတယ်။
ဒီစပိုင်တွေကို သံခြေကျင်းတွေ ခတ်ပြီး ဘားတိုက်ထဲမှာပိတ်ထားပါတယ်။
နောက် ဆုံး မြောက်ပိုင်းကျောင်း သားတပ် မတော်ဗဟိုကော်မတီက စပိုင် ၁၅ယောက်ကို သေဒဏ်ချဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျနော် တို့ စစ်ဖြစ်နေ တာပါ။ စစ်တပ်နဲ့ လက်နက် ကိုင်စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေတာပါ။
စပိုင်ကို သေဒဏ်ပေးရမယ်လို့ ကျနော် တို့ ဖွဲ့ စည်းပုံနဲ့ ဥပဒေမှာရေးသား ထားပါတယ်။
ကျနော်တို့ ရဲဘော်တွေဟာ ဒီစပိုင်တွေကြောင့် အသတ်ခံခဲ့ကြရပါတယ်။
တချို့ အဖွဲ့ ဝင်တွေ က စပိုင်အယောက်ရှစ်ဆယ်လုံး ကို သေဒဏ်ပေး ဖို့ တောင်းဆို ပါတယ်။
ငြင်းရင်းခုန်ရင်း နဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ၁၅ ယောက် နဲ့ သဘောတူညီချက်ရပါတယ်။
ဒီသေဒဏ်စီရင်ချက်က စပိုင်တွေလုပ် ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေ နဲ့စစ်အစိုးရအတွက် သူတို့ ဘယ်လောက် အရေးပါသလဲဆိုတဲ့ အချက်အပေါ် မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ် ချက်ချခဲ့ တာဖြစ် ပါတယ်။
သတ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပြောနေတဲ့အောင်နိုင်ဟာအဖြစ်အပျက်တွေကိုတွေး စိတ်ဆင်းရဲ နေ ပုံပါပဲ။
ဘယ်လိုဘယ်ပုံ သေဒဏ်ပေးခဲ့သလဲလို့ မေးကြည့်တဲ့အခါ သူ့ ကိုကြည့်ုပြီး ပိုလို့ စိတ်မသက်မ သာဖြစ်ရပါတယ်။
တချို့ ကိုပစ်သတ်တယ်။ တချို့ ကိုခေါင်းဖြတ်သတ်တယ်။ ကျနော်တို့ အရာရှိတွေကသူတို့ ကို အနီးကပ် ပစ္စ တိုနဲ့ ပစ်သတ်တယ်။
သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်တာ ပိုပြီးဝေဒနာခံစားရတယ် လို့ ကျနော်တို့ ထင်ပါတယ်။ ဓားကို ပြောင်းသုံးရင် သူတို့ ဝေဒနာ ခံစားရနည်းနည်း သက်သာမယ်လို့ ထင်တဲ့အတွက်ဓားကိုပြောင်းသုံးပါ တယ်။
ဒါပေမယ့် ခေါင်းက တိတိရိရိမပြတ်ဘူးဗျ။
But they were not cleanly beheaded, even though the spinal cords were severed.သတ်တာကို ကျနော် စောင့်ကြည့်တယ်။
ဒါဟာ ကျောင်းသားတပ်မတော်စစ်သားတွေရှေ့ မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ကျနော်တို့ သူတို့ အားလုံးကို လွှတ်လိုက်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လွှတ်လိုက်ရင် ကျနော်တို့ သူလျှိုတွေကို ကြိုဆိုသလိုဖြစ်နေမယ်။
ဒီလိုမကွက်မျက်ခင်မှာ ကေအိုင် အိုကနေ နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ ၊ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီတို့ ကို ချဉ်းကပ် ပါသေးတယ်။
အကျဉ်းသားတွေကို သူတို့ ဆီကိုလွှဲဖို့ ကျနော်တို့ အကူအညီလိုပါတယ် လို့ ။
သူတို့ ပြောတာက သူတို့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကို မရောက်နိုင်တဲ့အတွက် သူတို့ မကူညီနိုင်ပါဘူးတဲ့။
ဒီကိစ္စဟာ ကျနော်အတွက် အခက်ခဲဆုံးကိစ္စတခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ မှာ ရွေးစရာလမ်းမရှိဘူးလို့ ခံစားရတယ်။
ကျနော်တို့ ကိုသစ္စာဖောက်သူတွေဟာ ကျနော်တို့ ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေပါပဲ။ ကျနော့်သူငယ်ချင်း ထွန်းအောင် ကျော် (အဲဒီအချိန်က ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ ဥက္ကဌပါ) အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူက ကျနော့် အကိုကြီးလိုပါပဲ။ ကျနော်တို့ အရမ်းကို ရင်းနှီးပါတယ်။ သူက သူလျှို လို့ ဝန်မခံပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သက်သေ အထောက်အထားတွေအရ သူကသူလျှိုပါ။
တိုက်ပွဲက ပြင်းထန်ပါတယ်။ စစ်ဆိုတာဟာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့အမှန်တရားတခုပါ။
ကျနော်တို့ က သီးခြားဖြစ်နေပြီး တော့ လူ့ အခွင့်အရေးအဖွဲ့ တွေနဲ့ လည်း အဆက်အသွယ်မရှိပါဘူး။
ဒီမိုကရေစီ၊လူ့ အခွင့် အရေးတွေကိုသင်ကြားဖို့ လည်း အခွင့်အလမ်းမရှိပါဘူး။
တကယ်လို့ များရှိခဲ့ရင် အခြေအနေက တမျိုးဖြစ် သွားနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တာဝန်ယူပြီး ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။
တောင်အာဖရိက က အမှန်တရားကော်မရှင်လိုမျိုး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတခု ဖြစ်သင့် ပါတယ်။
ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာ လူတွေ သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
The problem will be to get MI to hand over their files.
ကျနော်တို့ ရဲ့ သူရဲကောင်းအောင်ဆန်း ကိုအတုခိုးပြီး ကျနော်တို့ နိုင်ငံလွတ်မြောက်ရေးအတွက် တောခိုခဲ့ ကြတယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြတာပါ။
ဒါပေမယ့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကြောင့် ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တယ် ဆိုတာတောင် မသိခဲ့ ပါဘူး။
အဲဒီတုန်းကကျနော့်အသက် ၂၄ နှစ်ပါ။
ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် လူကြီးဖြစ်ပြီလို့ ထင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီအတွေ့ အကြုံပြီး တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ ကျနော် အရမ်းငယ် ပါသေး လားဆိုတာသဘောပေါက် သွားပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအပြင်ဖက်ကိုရောက်လာတဲ့အတွက် ကျနော်ဝမ်းသာ တယ်။
အင်တာဗျူးအပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာ မဲဟောင်ဆောင်မှာ အောင်နိုင်နဲ ကျနော်နေ့ လည် စာစားပါတယ်။
ကျနော်ကအနံ့ ပြင်းပြင်းနဲ့ ဟင်းခွက်ကိုဘာလဲလို့ မေးကြည့်တော့သူကရီပါတယ်။
ပြီးတော့ မှပြောတာ ကမျောက်အူတွေပါ တဲ့ ။
(အောက်က မူရင်း အင်တာဗျူးပါ။ ယှဉ်ဖတ်ကြည့်ပြီး အမှားအယွင်းရှိရင် ပြင်ပေးစေချင်ပါတယ်။)
Posted on August 26, 2009 by sanooaung Excerpts from the “All Wars Are Dirty” by PHIL THORNTON
"I was shocked to see people blown up and dead bodies. I had no battle experience, but I did fight. In 1990 we fought for forty days. I took command after our chief-of-staff was injured. We got weapons from the KIO and what we took from dead enemy soldiers. "At this time I was elected general secretary. I was in charge of our underground network. We used it to recruit students inside Burma. We began to notice we were able to go back and forth through enemy lines without problems, but we found we had recruited students who had family connections with Military Intelligence. Our numbers quickly grew to more than 800. We suspected our network had been infiltrated by MI. Reports from the front line indicated we were losing battles in suspicious circumstances. Our soldiers noticed knife marks had been cut in trees that could have led Burmese soldiers to our positions.
"It was very difficult for us to know what to do. I panicked. We knew nothing about human rights, or, more to the point, we didn't understand. We asked the KIO to help us to interrogate. By now we hadalist of eighty spies. We made videotapes in case no one believed us. We chained the spies and locked them in the barracks. A Northern ABSDF central committee decided fifteen spies would be given the death penalty. We were at war, in armed struggle with the Burmese regime. Our constitution and law said we could give spies the death penalty. Many of our comrades had been killed because of these spies. Some members called for the death penalty for the entire eighty. We debated, argued, and finally agreed to fifteen. The sentences were determined by what the spies had done and how important they were to the [Burmese] military.” Aung Naing was distressed by his memories and having to replay the events leading up to the executions. I upset him further when I asked him how the death sentences were carried out.
“Some of them were shot and some were beheaded. They were shot at close range by pistol by our officers. We thought the guns caused more suffering, so we thought if we switched to machetes it would be less. But they were not cleanly beheaded, even though the spinal cords were severed. I watched . . . it was done in front of all ABSDF soldiers. “We would have liked to free all of them—but if we had, it would have sentamessage that we welcomed spies. It wasahard decision to make, and before we made it we approached, through the KIO, Amnesty International and the ICRC [International Committee of the Red Cross]. We needed help; we wanted to hand the prisoners 164 over to them. They said they couldn’t do anything, as they could not reach us on the Burma-China border. “It was the hardest thing I’ve ever done. But we felt we had no choice. It was not uncommon for armed opposition groups in Burma to execute spies. The Burmese army just killed anyone they caught on the spot withoutatrial.” Aung Naing left the room to throw up. He came back and swallowed hard before he continued.
“When life is peaceful, it’s easy to draw moral lines, but in war it’s different. In the jungle the only way to conduct politics is with armed struggle. It was said that the killings were politically motivated, but nobody gained any political advantage. We had no internal splits, none of us gained anything. Before the executions we ate fish paste, and after the executions we ate fish paste. It could have been eighty instead of fifteen. It is understandable the families are upset. We asked the parents to come and talk with us.
The people who betrayed us were our friends. My friend, Htun Aung Kyaw [ABSDF chairman at the time], was executed. He was like my older brother. We were very close. He didn’t admit he was involved, but evidence showed that he was. “The fighting was hard. War isadifferent reality. We were isolated and had no connection with human rights groups. We had no opportunity to learn about democracy or human rights. If we had, it may have been different. I believed I needed to take responsibility and resolve the problem. There should be an investigation like South Africa’s Truth Commission. People need to know what really happened. The problem will be to get MI to hand over their files.
We thought we were emulating our hero Aung San by going to the jungle to fight to free our country. We didn’t even know Burma was freed because of the Second World War. “I was 24. I thought I was old enough, but after this experience I knew I was too young to bealeader. I’m glad I’m out of politics.”